Ngokoluvo lwam, eyona mingeni iphambili iyabonakala. Ngelixa iitekhnoloji zethu ziqhubeka nokuphucuka, iinkampani zisasokola ukusebenzisa amandla eendaba ezentlalo, zifumane iimpembelelo, zilinganise imbuyekezo kutyalomali, zakhe abaphulaphuli, kwaye baphuhlise iindlela ezingadingi zixhobo zininzi. Inyani yile yokuba izibonelelo zosasazo lwentlalo ziyamangalisa, kodwa umgudu ofunekayo wokufumana ezo ziphumo uyaqhubeka nokujongwa lushishino oluqhubeka nokuzithengisa kwaye lubeke ulindelo phezulu kakhulu.
I-infographic entle. Ukufumana abaphulaphuli ojolise kubo kubaluleke kakhulu, imidiya yoluntu ayingombuzo wamanani akrwada. Okubaluleke kakhulu kukufumana unxibelelwano lokwenyani kunye nabaphulaphuli ojolise kubo.
Nov 30, 2012 ngo-5:48 AM
Soloko ujolisa umyalezo wakho kwiimfuno zeprofayile yakho efanelekileyo yomthengi
okanye umthengi kwaye ungaze woyike ukwahlukanisa abo banenjongo zero
usebenzisa iinkonzo zakho. Basenokwenza ukuba amanani abukeke kakuhle, kodwa angawo
akukho xabiso kwishishini lakho. Ngapha koko, ukuba uhlawula ibhanti yebhlog yakho
ngegigabyte okanye uhlawula umrhumo womfundi ngamnye kwincwadana yakho ye-imeyile
inkonzo, abazingeli freebie bachitha zombini imali yakho kunye nexesha lakho.
UYilo lweWebhusayithi yaseSingapore
Enkosi ngolwazi lwakho oluxabisekileyo olucaciswe ngokucacileyo.